Steel Pipe wokunze Wall akapfura nenyunje Machine - China Qingdao Effect Machine
Find yokuisvonaka simbi mutopota rwokunze bara nenyunje muchina yakaitwa China kubva rimwe remasangano China vagadziri uye bhizimisi - Effect Machine, inova imwe yakakurumbira mavanga. Leveraging pamusoro yemhando michina uye mukuru unyanzvi, tinogona kupa iwe michina yakadaro dzakakwirira zvakarurama, mukuru kushanda, yakavimbika kuita uye refu lifespan. Welcome to Wholesale unhu zvigadzirwa kubva yedu fekitari nenyanzvi. Steel Tube pena nenyunje Machine: Rinoshandiswa chaizvo nesimbi R ...
Find yokuisvonaka simbi mutopota rwokunze bara nenyunje muchina yakaitwa China kubva rimwe remasangano China vagadziri uye bhizimisi - Effect Machine, inova imwe yakakurumbira mavanga. Leveraging pamusoro yemhando michina uye mukuru unyanzvi, tinogona kupa iwe michina yakadaro dzakakwirira zvakarurama, mukuru kushanda, yakavimbika kuita uye refu lifespan. Welcome to Wholesale unhu zvigadzirwa kubva yedu fekitari nenyanzvi.
Steel Tube pena nenyunje Machine:
Rinoshandiswa chaizvo tsvimbo simbi, simbi chubhu, peturu, makemikari, Magetsi indasitiri. Mukuita rokuumba, kubudiswa, kuendesa kuunganidza basa chidimbu, pachava oxide unhani, ngura, gang, guruva, mafuta uye vamwe pamusoro pemvura. The Steel Pipe vakapfura nenyunje Machine anogona kumanikidza simba bara kwebhosvo pamusoro simbi mutopota pemvura iri hwepakutanga, kubvisa ngura layer Welding gang uye oxide scale, uye nokudaro kuwana dzakafanana esimbi kubwinya, kuti vabudirire zvine pamusoro roughness, uye kuvandudza ari bemhapemha unhu uye Anti-ngura zvazviri, achidzivirira chubhu uye kuvakoka kushandisa upenyu simbi chubhu.
The hwokugadzira parameters sezvinotevera:
mhando Zvinobudirira kuchenesa upamhi (mm) Inlet Ukuru bara nenyunje nzvimbo (mm) Rokuchenesa workpiece urefu (mm) Irikupa havukavu (m / Maminitsi) Rokuchenesa workpiece ukobvu (mm) Nenyunje vhoriyamu (makirogiramu / Maminitsi) First vachizvitakudza vanokwanisa (kg) Kufefetedza uwandu (m3 / h) Total simba (KW)
Previous: Roller Type pena nenyunje Machine
Next: Steel Plate Cleaning pena nenyunje Machine
4 turbine Roller Type pena nenyunje Machine
Concrete bara nenyunje Machine
Gas Cylinder bara nenyunje Machine
H Beam bara nenyunje Machine
Takura Type pena nenyunje Machine
Hook Type pena nenyunje Machine
Lpg Cylinder bara nenyunje Machine
Monorail bara nenyunje Machine
Chinjwa bara nenyunje Machine
Paver Block bara nenyunje Machine
Pipe External bara nenyunje Machine
Pipe Internal bara nenyunje Machine
Road pena nenyunje Machine
Roller Kuburikidza Type pena nenyunje Machine
Chakabva pena nenyunje Machine
Steel Bar pena nenyunje Machine
Steel Profile pena nenyunje Machine
Steel Structure pena nenyunje Machine
Steel Tube pena nenyunje Machine
Wire Mesh Belt bara nenyunje Machine
Wire Mesh Conveyor bara nenyunje Machine
High Effiicient Sand Kudzinga Aisanganisa Machine
Chinjwa Green Sand richigadzirisa Machine
Sand Peening Room nenyunje Cleaning Machine
Full Automatic Clay Sand And Green Sand paaivaumba ...